Ubuntu 14.10 ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရလား၊ | Linux မှ
Yoyo Fernándezကုမ္ပဏီသည်နိဒါန်းမလိုအပ်ပါ။ Google ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်သူသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခဲ့သည် - မကြာသေးမီကကူးယူခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းသည်ထိုက်တန်သလော။ Ubuntu ကို 14.10 ရှိပြီးသားနှင့်ရက်စွဲအထိရှိခြင်း Ubuntu ကို 14.04 LTS?
(ကျနော့်အမြင်အရ) မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖြန့်ချိမှုကမည်သည့်သတင်းများပါ ၀ င်သည်ကို ဦး စွာသိထားရမည် Ubuntu ကို 14.10 နှင့်မိသားစု။
1 Ubuntu 14.10 တွင်အသစ်အဆန်းများ
2 Kubuntu 14.10 တွင်အသစ်သောအရာများ
3 Xubuntu 14.10 မှာဘာအသစ်တွေလဲ
Ubuntu 14.10 တွင်အသစ်အဆန်းများ
Ubuntu 14.10 ၏ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်တွင်အနုပညာလက်ရာများတွင်သေးငယ်သော (အနည်းငယ်မျှသာ) အပြောင်းအလဲအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Nautilus ရှိ Home and Videos icon နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သင်ဖမ်းယူမှုကိုကြည့်ပါကယခု Maximize ခလုပ်သည် သေးငယ်တဲ့စတုရန်း။
အဓိကအပြောင်းအလဲများသည်ဒုံးကျည်များလွှတ်တင်ရန်မဟုတ်ဟုသင်စဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်ပျင်းစရာကောင်းသည့်ပစ်လွှတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံး application များ၏ဗားရှင်းအသစ်များကိုသာထည့်သွင်းထားသည်။ ဥပမာ -
Firefox ကို 33
Thunderbird ကို 33
ကို Nautilus 3.10
ဤအရာအလုံးစုံ Linux Kernel 3.16 (ဗားရှင်း 3.17 ရရှိနိုင်သည့်အခါ) နှင့်အတူအချို့သောအရံပစ္စည်းများနှင့်အတူ (ငါ ArchLinux နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါဝင်သည်ရသော) အချို့သောအသုံးပြုသူများအားပြproblemsနာများကိုတင်ပြထားပါတယ်သောအတူလိုက်ပါသွား
Kernel 3.16 သည်သိသာထင်ရှားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာနဲ့ Power 8 နဲ့ arm64 platforms များအပါအ ၀ င် hardware support အသစ်တွေကိုယူဆောင်လာပါတယ်။ ၎င်းတွင် Intel Cherryview, Haswell, Broadwell နှင့် Merrifield စနစ်များအတွက်အထောက်အပံ့နှင့် Nvidia GK20A နှင့် GK110B GPU များအတွက်ကန ဦး အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်။ Intel, Nvidia နှင့် ATI Radeon မှထုတ်ကုန်များစွာတွင်ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသည်။ ထို့အပြင် Radeon.264 video encoder ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့်အသံတိုးမြှင့်မှုများလည်းရှိသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်မျိုးစပ်ဂရပ်ဖစ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့။
GTK ကိုအဆင့် ၃.၁၂ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည် ဗားရှင်း ၅.၃ သို့ QT ။ IPorg ပရင်တာများထပ်မံထည့်သွင်းထားသည့် Xorg 5.3 သည် pci မဟုတ်သောကိရိယာများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အထောက်အပံ့ရှိသည်။ ယခု Xephyr DRI3 နှင့်သဟဇာတ။ ဇယား ၁၀.၃ update တွင် AMD Hawaii GPU ကိုထောက်ပံ့သည်။ dri3 ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့နှင့် nouveau maxwell devices များတွင်ပဏာမအထောက်အပံ့တိုးမြှင့်သည်။
Kubuntu 14.10 တွင်အသစ်သောအရာများ
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့် Kubuntu 14.10 သည် Plasma 4.14 နှင့်အတူလာသည်။ ဤအချိန်တွင်၎င်းတို့အား Plasma5ဖြင့်ပုံရိပ်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးမပြုသင့်သော်လည်း၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ကစားရန်အဆင်ပြေသည်။
Xubuntu 14.10 မှာဘာအသစ်တွေလဲ
Xubuntu 14.10 အရ၎င်းကိုအသုံးပြုသည် pkexec ၏အရပျ၌ gksudo လုံခြုံရေးတိုးတက်စေရန်အတွက် terminal မှ root access ရှိသော graphical applications များအသုံးပြုရန်။
'Utopian Unicorn' ကုဒ်နံပါတ်ကိုဆင်နွှဲရန်နှင့် Xubuntu ကိုမည်မျှလွယ်ကူစွာပြုပြင်နိုင်သည်ကိုပြသရန်ဤထုတ်လွှတ်မှုတွင်အထူးအရောင်များသည်ပန်းရောင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့၎င်းမှတစ်ဆင့်ပိတ်နိုင်သည် gtk-theme-config ကိုလုပ်ပါ, အဖွဲ့စည်းမန်နေဂျာ၌တည်၏။ Custom Highlight Colours option ကိုပိတ်ထားရုံသာဖြစ်သည်။
မဟုတ်ပါက Xfce Power Manager plugin အသစ်ကို panel ထဲသို့ထည့်ပြီး Ctrl + Tab အတွက်အခင်းအကျင်းအသစ်၏ Item များကိုအစွန်အဖျားတွင်ရွေးချယ်နိုင်သည် ကြွက်.
Xubuntu ကို Download လုပ်ပါ
သတင်းအနည်းငယ်ကိုကြည့်ပြီးလျှင်အချိန်နှင့်အမျှမေးခွန်းကိုဖြေရန်အချိန်တန်ပြီ - မွမ်းမံသင့်သည်လား။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်အရအဖြေကွဲပြားနိုင်သည်။ versionitis ပြproblemsနာများရှိသူများသည်၎င်းကိုလုပ်ရန်တွန့်ဆုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ အဆင့်မြှင့် မကြာခင်မှာပဲ, သို့သော်, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ကလုပ်နေတာမထိုက်တန်သည်။
ဤ Ubuntu 14.10 နှင့်မိသားစု၏ဗားရှင်းတွင်တိုးချဲ့သောအထောက်အပံ့များရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ဗားရှင်း 15.04 ထွက်လာလျှင် (ထွက်လာလျှင်) ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ကိုရလိုပါကထပ်မံပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ကြိုးစားလိုသည်ဆိုပါက ISOS ကို download လုပ်ပြီး LiveCD mode တွင်ပထမဆုံးစစ်ဆေးပါ၊ သင်၏ကွန်ပျူတာ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှန်ကန်စွာလည်ပတ်စေရန်သေချာသော်လည်းထပ်မံပြောင်းလဲမှုများသည်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံတပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်မသင့်လျော်ပါ။ သို့သော်လည်းငါသည်လူတိုင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ထပ်ခါတလဲလဲ
14.04 မှအသစ်ပြောင်းလိုပါကအောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရုံသာဖြစ်သည် -
Alt + F2 ကိုနှိပ်ပြီး "update-manager" ကိုရေးပါ။
Update Manager မှဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောသင့်သည် - ဖြန့်ချိမှုအသစ်တစ်ခုရနိုင်သည်။
ကြောင်းနှင့်အတူကံကောင်းပါစေ !! 😉
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Ubuntu 14.10 (နှင့်မိသားစု) ကိုဒေါင်းလုတ်မွမ်းမံမှုအတွက်ရရှိနိုင်လား (သို့) မရသလား။
သင်ဟာ nautilus panel တွင် icon ၂ ခုသာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသတိပြုမိရန်အလွန်လေ့လာသူဖြစ်ရမယ်။
ကြည့်ရှုပါ .. XD
၁၄.၁၀ ကိုစတင်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်စောင့်နေသည် * သို့မဟုတ် *
P.S. download icon ၏အစက်များသည်သေးငယ်သည်။ v
သင်၏နေ့စဉ်အလုပ်အတွက် Ubuntu စတူဒီယိုပါ ၀ င်သည့်“ သတင်း” သို့မဟုတ်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောဆော့ဖ်ဝဲလိုအပ်လျှင်၊ ဟုတ်ကဲ့။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိတစ်နေရာရာမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တာက ubuntu 15.04 မရှိဘူးဆိုတာနောက်မှဖြစ်လိမ့်မည်။
ထိုကြောင့်ငါ "15.04 ရှိလျှင်" ဟုပြောသည်ဒါကြောင့် .. 😉
အမှန်တရားကတော့ Ubuntu မွမ်းမံမှုများသည်တကယ့်ကိုနာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသောအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက်ကွန်ပျူတာကိုခြစ်ရာကနေပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်အမြဲတမ်းလိုလိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီပရိုဂရမ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပရိုဂရမ်ကိုရရှိနိုင်ရန်ထည့်သွင်းရမည့် "အပို" သိုလှောင်မှုပမာဏ ...
ငါ Arch သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးကတည်းကနှစ်နှစ်ကျော်ကအရမ်းပျော်တယ်။ ငါတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှားယွင်းစွာပြောမိလျှင်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ Ubuntu ကိုပြန်မသွားတော့ဘူးလား။
V သည် Vivid အတွက်ဖြစ်သည်
ubunto မှာပရိသတ်အများကြီးမရှိဘူး၊ ဘယ်အချိန်မှာသူတို့က ubuntu system နဲ့ဆဲလ်ဖုန်းထုတ်ပေးမှာလဲ။
AND LUBUNTU ???? ကောင်းပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Man, သင်တရားဝင်ရုံးခွဲများကိုသင်ပြောလိုလျှင်သူတို့အားလုံးဖော်ပြပါ။ ငါမသိဘူးလို့ငါဆိုတယ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, Lubuntu အလွန်တရားဝင်မဟုတ်, LXDE ၏ပုံကြီးချဲ့ပုံတူကူးယူ, သူက ubuntu-touch ကိုအသံများဆောင်တတ်၏, အပြုသဘောဆောင်နောက်ဆုံး xorg ၏ဗားရှင်း, QT5 စာကြည့်တိုက်များအတွက်ထောက်ခံမှု။
သို့သော်သင် Lubuntu ကိုနှစ်သက်လျှင် Trisquel0application များကို 7.0 သို့လျှော့ချနိုင်သည်။ xorg, lxterminal, pcmanfm, lxsession နှင့် lxde-core သာကျန်သည်။
sudo nano /etc/apt/sources.list [သင်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ]
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ utopic အဓိကကန့်သတ်ဝuniverseာ multiverse
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ utopic-security အဓိကကန့်သတ်ထားသောစကြ ၀ iverseာ
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ utopic-updates အဓိကကန့်သတ်ထားသောစကြဝmultာ multiverse
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ utopic- အဆိုပြုထားအဓိကကန့်သတ်ဝuniverseာ multiverse
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ utopic-backports အဓိကကန့်သတ်ထားသည့်စကြ ၀ multာ multiverse
ထို့နောက် grub-coreboot ကဲ့သို့အဆင့်နိမ့်သော package များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Lubuntu 14.10 ကိုရနိုင်သည် အလားတူဝီကီ Ubuntu ကနေ၊ ဆဲ beta ကိုဌာနခွဲ၌တည်၏.
ပြီးတော့ငါပြောခဲ့တာတွေကိုသေချာပေါက်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ် Elav ၎င်းသည် Lubuntu အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အချိန်တွင်အထူးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဟေ့ စောင့်ပါ ပြီးပြီ တကယ်တော့လူတိုင်းထွက်လာကတည်းကပါ။ ငါအဲဒီနေ့မှာပဲ download လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါကလုံးဝ beta မဟုတ်ဘူး။ သီးခြားကဏ္ section တစ်ခုတွင်သူတို့အလွယ်တကူအမည်ပေးပြီး (သင်လိုချင်ပါက)“ ၎င်းသည်များစွာမလုံလောက်ပါ” ဟုပြောခဲ့သည်။ သို့သော်အနည်းဆုံး၎င်းတို့ပါဝင်သည်။
သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ စာရေးသူက Openbox ကိုကြိုက်တယ်။
ကောင်းပြီ, Lubuntu ကို install လုပ်ထားသူများအတွက် dist-upgrade တစ်ခုသည်လုံလောက်သည်။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်မှာ၊ Xbox သည် Debian (Wheezy နှင့် Jessie) ဗားရှင်းနှစ်ခုလုံးတွင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်၏ PC နှစ်ခုလုံးမှာ Openbox ကိုဆက်လုပ်သည်။ Debian Jessie သည် freeze အဆင့်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်းတိုးတက်မှုများကိုကျွန်ုပ် update လုပ်တိုင်းတိုင်းလာသည် (Ubuntu 14.04 သည်သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် Debian ထက်ပိုမိုခေတ်မီနေသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်)
မေးခွန်းတစ်ခုကဒီဗားရှင်းသည် SystemD နှင့်အလုပ်လုပ်သလား။
သိသာထင်ရှားသည်မှာ အကယ်၍ သင်၎င်းကိုမသုံးလိုပါက slackware သို့မဟုတ် gentoo ကိုသုံးနိုင်သည်။
မင်းကိုစိတ်ပျက်မိလို့ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ PC မှာဒီ Ubuntu 14.10 သုံးပြီး systemD ကိုဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့ဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် Upstart ကိုလိုက်နေတယ်။ (ပိုကောင်းတာက systemD ကိုငါမကြိုက်ဘူး) ။ ငါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ယခုသင်တရားဝင် repositories ကနေ systemD ကို install လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီး 14.04 အထိမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် Upstart ရဲ့သဲလွန်စတွေအားလုံးကိုဟုတ်ကဲ့စတင်ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမွမ်းမံမှုများပုပ်စပ်လျက်ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အားဘဏ်သို့မ ၀ ယ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ပြုပြင်ခြင်းသို့အရန်ကူးခြင်းများပြုလုပ်သည်။ သာမာန်အသုံးပြုသူ (သန်းပေါင်းများစွာသော) သူတို့လိုချင်သောအရာသည်၎င်းတို့၏ပီစီများအလုပ်လုပ်ရန် အလှဆုံး။ Mozilla သည်ဥပမာမွမ်းမံမှုများ၊ ကျွန်ုပ်သည် "မွမ်းမံမှုမွမ်းမံရန်" အကွက်ကိုစစ်ဆေးပြီးသော်လည်း၎င်းသည် Ubuntu combo တွင်ပါ ၀ င်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၊ အပိုဖြည့်သွင်းမှုများသည်ပိတ်ထားပြီးအချို့သည်တစ်နှစ်ထက် ပို၍ မွမ်းမံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ၏အ distro Xubuntu အပေါ်အခြေခံပြီး, Voyager ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါအချို့သောလှိမ့်သွားဖို့စဉ်းစားမိပါတယ်, ငါနည်းပညာရှင်မဟုတ်, ငါအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်ငါ update လုပ်ဖို့အကူအညီတောင်းတက်အဆုံးသတ်, သို့သော်ငါ၏အ dual- Boot တက်အတွက် 2005 ခုနှစ်၏ Windows ကိုဆက်လက်အလုပ်လုပ် ...3နှစ်အကြာငါသွား၏ Linux ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။
repos အသစ်ကိုထည့်ပါ (သို့မဟုတ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုသာညွှန်ပြပါ) apt-get dist-upgrade လုပ်ပါ
Fedora မှာ FedUp နဲ့ voila ကိုသုံးပါတယ်။
သင် format လုပ်ရန်အတွက်သင့်အနေဖြင့်အဆင့်မြှင့်ရန်သာလိုသည်။ ၎င်းသည်သင်ချပ်ချပ်မှတပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ထားသည့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါကသင် ပိုမို၍ ဒုက္ခရောက်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်အမုန်းဆုံးအရာကိုမွမ်းမံမှုများဖြစ်လျှင် Slackware ကိုပိုသုံးပါ (၄ င်းတို့သည်အလွန်ရှားပါးသော်လည်းအလွန်တိကျသောနောက်ဆုံးသတင်းများဖြစ်သည်) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Debian Wheezy ကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက version 7.7 ထဲမှာရှိပြီး Chromium / Chrome မှာရှိတဲ့ GlibC ပြproblemနာကိုတောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ပိုတည်ငြိမ်လာတယ်။
သူကသုံးလသားအရွယ်ရှိပြီး Slackware ကိုသင်အကြံပြုမလား။ ၎င်းအတွက် Ubuntu နှင့်အတူနေလျှင်ပိုနှစ်သက်သည်မှာ ၆ လတစ်ကြိမ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ Slackware နှင့်သူလုပ်ရလိမ့်မည်။ မှီခိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲလ်များအပြင်အခြားအရာများကိုလည်းဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်အဲဒါကို compile လုပ်ခြင်းဟာ Slackbuilds မပါသောရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မွမ်းမံရန်မသင့်ပါ။ ၎င်း၏အလေးချိန်သည် 1GB သာရှိပြီးအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်အတွက်အလွန်လေးလံသောကျသည်။
သူတို့ ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာဆိုးလိုက်တာကအခမ်းအနားဟာနာကျင်မှု၊ မဟုတ်သလိုထိုကဲ့သို့သောရှိ၏။ 😐: - / 🙁🙁: ->
အဆင့်မြှင့်တင်မထားပါနဲ့၊ အဲဒါမတန်ပါဘူး။ အိမ်သုံးသုံးစွဲသူများအမြဲတမ်း LTS တွင်နေပါ။ ၁၂.၀.၄.၄ ကျန်ရှိနေသေးသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အညီ ubuntu ၏ LTS လွှတ်တင်မှုများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုအရက်အနည်းငယ်အတွင်း Trisquel 12.04.4 ကိုစောင့်ဆိုင်း! ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်ကိုအသိအမှတ်ပြုမလားသိခြင်း၏စိတ်တွင်။
ဒီဗားရှင်းတွင် ၉ လထောက်ပံ့မှုသာရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ငါ openSUSE စက်ရုံမှာနေတယ်။ Gnome-Shell 3.14 ထွက်လာပြီ။ D.
ကောင်းပြီ, ငါ openSUSE RC1 နှင့် Shell 3.14 နှင့်အတူအရုပ်ဆိုးအလတ်စား bug တွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ငါထုတ်လုပ်မှု enviroments များအတွက်တကယ်ကိုအကြံပြုပါဘူး, ကအရမ်းအစိမ်းရောင်နှင့်သီးခြား themes များနှင့် extension များဖြစ်ပါသည်, လူကြိုက်အများဆုံးသောသူများကိုမသွားကြနှင့်အချို့ပြsomeနာများပင် နှင့်ဤမရှိရင်, Gnome Shell ကငါ့အမြင်အတွက်အသုံးမပြုနိုင်သည်။
ဒီ ၁၄.၁၀ ဟာအမျိုးသမီးကိုယ် ၀ န်လို ၉ လလောက်သာအထောက်အပံ့ရနိုင်ပြီး LTS ထက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ထိုအခါငါကိစ္စတွင်, kernel ကို 3.16 အတွက်ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပေမယ့် 3.13 အတွက်အကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်အချို့ပရိုဂရမ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဟာ့ဒ်ဝဲရှိပါတယ်။
ဒီအလယ်အလတ်ဗားရှင်းတွေဟာအဓိပ္ပာယ်သိပ်မရှိလှပါဘူး။ သူတို့ဟာ LTS ကိုပိုအာရုံစိုက်ပြီး ၉ လမွေးဖွားတာထက်မွမ်းမံသင့်တယ်ထင်တယ်။
Debian တွင် Jessie သည် ၃.၁၆ သို့ပြောင်းပြီးဖြစ်သည်။ မကောင်းတာကနောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှုတွေမှာသူတို့လိုမျိုး VMWare OpenGL renderer ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ (ငါ့အတွက်မှော်ဆန်စွာပေါ်လာတဲ့) သူက Steam games တောင်မှငါ Windows ပေါ်မှာကစားတုန်းကထက်ပိုလေးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကဖိုရမ်မှာတွေ့ရမယ်။
Ubuntu MATE Remix 14.04 သည် Virtual အရသာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အချိန်အထိစောင့်ဆိုင်းပါမည်။
Ubuntu Mate 14.04 ရှိသလား? ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Mate LTS ကိုညွှန်းတဲ့နေရာမှာမတွေ့ရပေမဲ့ရုတ်တရက်ငါမှားသွားတယ်။
Ubuntu MATE ကို version 14.10 မှတရားဝင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကတည်းက Lapsus Calami သည်ကျွန်ုပ်ဘက်မှပါ ၀ င်သည်။ Ubuntu ကိုအနည်းဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်သင် Unity interface သေဆုံးခြင်းကိုမုန်းလျှင် MATE desktop ကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အလယ်မှာထွက်လာတဲ့သူတွေကအရမ်းတည်ငြိမ်တယ်၊ ငါပြောမယ်။ ငါက updated နှင့်အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ LTS ၏ကျေးဇူးသည်ရှည်လျားသောထောက်ပံ့မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆာဗာများ (သို့) system အကြောင်းများစွာမစဉ်းစားလိုဘဲအသုံးပြုရန်အတွက်သာအသုံးပြုရန်အတွက် hyperproved ဖြစ်သည်။
အခုနောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကိုကြိုက်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ငါလိုတည်ငြိမ်တဲ့ဗားရှင်းအသစ်ထွက်လာတိုင်းမွမ်းမံသင့်တယ်။ Ubuntu ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာကဒီဟာကအလဟ edge ဖြစ်မနေဘူး၊ အနည်းဆုံးတော့ Fedora လိုနောက်ဆုံးပေါ် application တွေအမြဲတမ်းလိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်တည်ငြိမ်မှုကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲ၊
၎င်းသည်အလယ်အလတ်တန်းစားဗားရှင်းအချို့အတွက်မကောင်းသောနာမည်တစ်ခုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် Kubuntu 9.xx နှင့် 10.xx (Kubuntu 10.04 LTS တောင်မှသိမ်းဆည်းမခံခဲ့ရ) ကဲ့သို့သောကွဲပြားသောပတ်ဝန်းကျင်၏နောက်ပိုင်းရင့်ကျက်သောဗားရှင်းများသို့ကူးပြောင်းခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Ubuntu မှာ ၈.xx ဌာနခွဲကသိပ်မကောင်းဘူး။ ၁၁.၁၂ နဲ့ ၁၂.၁၀ ကနေ ၁၃.၀၄ အထိမအောင်မြင်ဘူး။ Unity ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် Ubuntu ၏ပြောင်းလဲမှုကြောင့်တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ အမှားများစွာနှင့်စတင်ခဲ့သော်လည်း ၁၂.၀၄ သည်အထူးသဖြင့်လအနည်းငယ်အကြာတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည် (Ubuntu 8 အတွက်၎င်းသည်တည်ငြိမ်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ )
သို့သော်ယနေ့ ၁၄.၁၀ သည်မျှတစွာတည်ငြိမ်သင့်သည်။ Unity ပြောင်းလဲမှုသည်အသေးစားဖြစ်သောကြောင့်ငါမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်များအရ systemD ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းမပြုနိုင်သေးပါ။ မှတ်စု။
Kubuntu ၏ဖြစ်ရပ်တွင် Plasma5သည် KDE3.5x မှ KDE4 သို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ KDE4 သည်အလွန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်လာချိန်တွင် KDEXNUMX သည်ယခုခေတ်အံ့သြစရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။
ငါအသစ်သော icon များချင်!
အကယ်၍ သင်သည် Numix pack သို့မဟုတ် Faenza ကိုသုံးလျှင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပျက်ကွက်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာ Linux မှဝဘ်ပေါ်တွင်အောက်ဖော်ပြပါအဆိုပြုလွှာတင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်သော်လည်းအဓိကအကြောင်းအရင်းနှင့်စာရေးသူ၏ငါအနaတရာယ်ရှိခြင်းကြောင့်အန္တာရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Ubuntu တွင်အကောင်းဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်သင်ခန်းစာတောင်းခံခြင်းသည်အလွန်အကျွံဖြစ်ပါသလား။ ငါမွမ်းမံမီကြိုတင်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်၏လက်စွဲစာအုပ်အဖြစ်အဆိုပြုထား။ ငါမသိရပါဘူး၊ အကယ်၍ မင်းက AMD (သို့) nvidia gpu စသည်တို့စသည်တို့ရှိလျှင်၊ ဂရပ်ဖစ်onnရိယာကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်လျှင်ပိုကောင်းသည်၊ အရာဝတ္ထုများမစဉ်းစားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်မွမ်းမံသောအခါပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဤတွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် lts ပိုကောင်းပါကသူတို့အပေါ်တွင်သူတို့မှတ်ချက်ပေးသည့်အတိုင်း lubuntu အကြောင်းကိုမမေ့ပါနှင့်
မင်္ဂလာပါ၊ သောကြာနေ့၊ windows xp ရှိသော Ubuntu 14.10 ကိုကျွန်ုပ်၏ acer one netbook တွင် download လုပ်ခဲ့သည်။ အထောက်အပံ့ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သောကြောင့် Linux ကိုစမ်းသပ်ချင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် web မှ zip ဖြင့်ကူးယူပြီးပြproblemနာမရှိဘဲတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံး xp ဒါမှမဟုတ် Ubuntu 14.10 ကိုသွားနိုင်ပါပြီ။ ပြoneနာတစ်ခုတည်းကအဲဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် patch လိုအပ်ရင်အိုင်ကွန်တွေနဲ့အခြားသူတွေကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေရင်စပိန်ဘာသာစကားကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ။
ကောင်းပြီ, ငါသာအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့တယ်, က 14.04 ကဲ့သို့လက်တွေ့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ငါ့အဘို့ခြားနားချက်ယခုငါ့အဘို့ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်သောကွောငျ့, ပုံ, 14.04 တပ်ဆင်သည့်အခါအမှားအချို့အထူးသဖြင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်အမှားများရှိခဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေ အင်တာနက် ahira အင်တာနက်စာမျက်နှာကဒီအမှားကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးသည်
အဆွေတို့၊ အဘယ်သို့ပြောစရာရှိသနည်း။ လုံးဝမွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်နည်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာဗားရှင်းကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေတယ်၊ ​​၁၄.၀၄ ။ တဖန်ငါစည်းလုံးညီညွတ်ရေး updated ပါပြီ ထိုအခါငါ 14,04 မှ update လုပ်ဖို့ကိုသက်ဝင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အရမ်းလေးတယ်။ အရာရာကိုမွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါသလား?